Moramanga : tafakatra 19 ireo olona maty narendriky ny lakana | NewsMada
Moramanga : tafakatra 19 ireo olona maty narendriky ny lakana
Hita, afakomaly, avokoa ny fatin’ireo olona rendrika tamin’ilay lakana tao Moramanga. Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana, tafakatra 19 ny isan’ireo olona namoy ny ainy tamin’ity loza ity.
Tsiahivina fa ny alahady tolakandro teo no nitrangan’ny loza tao Moramanga. Mpivavaka miisa 30 niaraka tamin’ny mpivoy lakana roa lahy ireo niampita ny reniranon’i Mangoro teo amin’ny toerana atao hoe Ambodimanga izay mivelatra eo ho eo amin’ny 105 m. Lakana roa izay nafatotra no niarahan’ireto mpivavaka ireto, raha ny fanazavana voaray hatrany. Rendrika tampoka anefa ireo lakana ireo noho ny vesatra diso tafahoatra, araka ny tatitra niainga avy any Moramanga. Olona miisa 13 indray maty raha 13 ny velona. Olona enina kosa, tsy hita popoka tamin’io fotoana io ary izao hita izao avokoa taorian’ny fikarohana. Nisy ny fifanomezan-tanana teo amin’ireo tompon’andraiki-panjakana ao amin’ny distrikan’i Moramanga ho fankaherezana ireo hany sisa velona.
Aoka hitandrina hatrany amin’ny fiampitana amin’ireny lakana ireny satria tampoka ny fiavian’ny loza. Vola rahateo ny tadiavin’ny mpitondra lakana, hany ka tsy manaja intsony ny fenitra mifanaraka amin’izany ny sasany amin’izy ireny.